Qatar Airways inotangisa nyowani UV kabhini disinfection tekinoroji mubhodhi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Qatar Airways inotangisa nyowani UV kabhini disinfection tekinoroji mubhodhi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Qatar Airways: Vapfuuri vanogona kutarisira mwero wepamusoro wekuchengetedza uye hutsanana parwendo rwavo rwese
Qatar Airways inotanga kushandisa Honeywell's Ultraviolet (UV) Cabin System vhezheni 2.0
Zvese zvishandiso zvakaedzwa zvakakwana mubhodhi reQatar Airways 'ndege
UV mwenje yakaratidzirwa kuve inokwanisa kumisikidza hutachiona hwakasiyana uye mabhakitiriya kana yaiswa mushe
Qatar Airways inova yekutanga mutakuri wepasi rose kushandisa Honeywell's Ultraviolet (UV) Cabin System vhezheni 2.0, ichienderera mberi nekuvandudza matanho ayo ehutsanana pabhodhi.
Iyo yazvino vhezheni ye Honeywell UV Cabin System iyo ndeyemunhu uye inoshandiswa neQatar Aviation Services (QAS), yakaunzwa kuti iwedzere kushanduka, kuvandudza kuvimbika, kufamba uye nyore kwekushandisa zvichienzaniswa neyakatangira, nemapapiro eUV akareba anobata nzvimbo dzese dzakatetepa uye dzakafara mubhodhi, kuderedza iyo yakazara disinfection nguva. Iyi vhezheni inosanganisirawo ruoko rwekudzungaira iyo inouraya nzvimbo senge jongwe uye dzimwe nzvimbo diki uye haina-mota inotungamira kune mashoma mashandisirwo ebhatiri. Mune kiriniki bvunzo, UV mwenje yakaratidzirwa kuve inokwanisa kumisa akasiyana hutachiona uye mabhakitiriya kana akaiswa mushe.
Mushure mekutambira zvikamu gumi neshanu zvechazvino vhezheni yeHoneywell UV Cabin System V17, zvishandiso zvese zvakaedzwa zvakakwana pabhodhi reQatar Airways. Ndege inovavarira kuishandisa pabhodhi ndege dzese dzinochinja kuHamad International Airport (HIA).
Qatar Airways Mutungamiri Mukuru weGroup, Anokudzwa VaAkbar Al Baker, vakati: “Sendege yekutanga yepasi rose kushandisa shanduro yazvino yeHoneywell UV Cabin System V2 mundege yedu, inonyanya kushandiswa zvine hunyanzvi uye nehunyanzvi hwehunyanzvi. QAS yakaenderera mberi nekuchengetedza basa redu risinganetsi panguva yekupararira kweCOVID-19, ichinyanya kutsigira nendege dzekudzosera kumusha uye nekuwedzera mutoro webasa.
“Seyendege yekutanga pasi rose kuzadzisa Skytrax yepamusoro-5-Star COVID-19 Ndege Yekuchengetedza Rating, ndege yekutanga kuMiddle East kutanga miedzo yeiyo itsva IATA Travel Pass 'Dhijitari Pasipoti' app, uye mazhinji nguva pfupi yadarika, ndege yekutanga pasi rose kushandisa ndege ine vaccinic yakazara uye vafambi - iri mukombero yedu kuenderera mberi tiri pamberi pehunyanzvi, uye kuramba tichishandisa matanho azvino ekuchengetedza uye ehutsanana pabhodhi nepasi. ”
QAS inoenderera mberi ichitsigira pasi-kirasi yekubata zviyero uye hukama hwakareba hwekumira nendege dzese, uye pamwe neHIA inovimbisa rwendo rwakachengeteka uye rusina musono kune vese vanofamba. Ndege dzeQatar Airways dzichaenderera nekuwaniswa mishonga yekuchenesa inokurudzirwa neInternational Air Transport Association (IATA) uye World Health Organisation (WHO). Iyo yazvino vhezheni yeiyo Honeywell UV Cabin System V2 ichazoshandiswa seimwe nhanho mushure mekushandisa kwehutachiona hutachiona, kuverengera iwo akanyanya mwero maitiro ehutsanana.